Genesis 27 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Isak hyiraa Yakob (1-29)
Esau bae sɛ ɔrebɛpɛ nhyira nanso na onnuu ne ho (30-40)
Esau benyaa Yakob ho tan (41-46)
27 Afei bere a Isak bɔɔ akwakoraa a onhu ade no, ɔfrɛɛ ne ba panyin Esau+ sɛ: “Me ba!” Ɛnna obuae sɛ: “Mini!” 2 Na ɔkae sɛ: “Mabɔ akwakoraa. Minnim da a mewu. 3 Enti mesrɛ wo, afei fa wo nneɛma a wode kɔ ahayɔ, w’agyan ne w’agyan kotoku, na kɔpɛ wuram nam brɛ me.+ 4 Woba a, fa yɛ akɔnnɔduan a mepɛ paa brɛ me ma minni, na minhyira* wo ansa na mawu.” 5 Bere a Isak ne ne ba Esau rekasa no nyinaa na Rebeka retie. Na Esau kɔɔ wuram sɛ ɔrekɔpɛ nam aba.+ 6 Ɛnna Rebeka ka kyerɛɛ ne ba Yakob+ sɛ: “Metee sɛ wo papa reka akyerɛ wo nua Esau sɛ, 7 ‘Kɔ wuram kɔpɛ nam bɛyɛ akɔnnɔduan ma minni na minhyira wo wɔ Yehowa anim ansa na mawu.’+ 8 Enti me ba, yɛ aso tie nea mereka akyerɛ wo yi na yɛ ho adwuma.+ 9 Mesrɛ wo, kɔ mmoadan no mu kɔpɛ mpɔnkye nkumaa abien a wɔte apɔw brɛ me na memfa nyɛ akɔnnɔduan a wo papa pɛ. 10 Miwie a, na wode akɔma wo papa ma wadi, na wahyira wo ansa na wawu.” 11 Ɛnna Yakob ka kyerɛɛ ne maame Rebeka sɛ: “Me nua Esau ho wɔ nwi+ na me de, me ho yɛ toromtorom. 12 Na sɛ me papa de ne nsa ka me ho ɛ?+ Ɛbɛyɛ sɛ nea meredi ne ho fɛw, na ɛbɛdan nnome ama me, na ɛrenyɛ nhyira.” 13 Ɛnna ne maame ka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, nnome biara a anka ɛbɛba wo so no mmra me so. Wo de, yɛ nea maka no na kɔfa mmoa no brɛ me.”+ 14 Enti ɔkɔfaa wɔn brɛɛ ne maame, na ɔde yɛɛ akɔnnɔduan a ne papa pɛ. 15 Afei Rebeka de ne ba panyin Esau ntaade a ɛyɛ papa paa wɔ ne nkyɛn wɔ ofie hɔ no hyɛɛ ne ba kumaa Yakob.+ 16 Ɛnna ɔde mpɔnkye no nhoma duraa ne nsa ne ne kɔn ho baabi a nwi nni no.+ 17 Afei ɔde akɔnnɔduan ne paanoo a wasiesie no maa ne ba Yakob.+ 18 Enti ɔde kɔɔ ne papa hɔ, na ɔkae sɛ: “Papa!” na ogyee so sɛ: “Mini! Ɛyɛ wo hena, me ba?” 19 Ɛnna Yakob ka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Ɛyɛ wo ba panyin Esau.+ Nea wokae no mayɛ awie. Mesrɛ wo, sɔre tena ase na di wuram nam a makum no bi na hyira* me.”+ 20 Ɛnna Isak bisaa ne ba no sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na wunyaa bi ntɛm saa?” Obuae sɛ: “Ɛyɛ Yehowa wo Nyankopɔn na ɔma minyae.” 21 Afei Isak ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Mesrɛ wo, twiw bɛn me na memfa me nsa nka wo nhwɛ sɛ ampa woyɛ me ba Esau anaa.”+ 22 Enti Yakob twiw bɛn ne papa Isak, na ɔde ne nsa kekaa ne ho, na ɔkae sɛ: “Ɛnne no yɛ Yakob nne, nanso nsa no yɛ Esau nsa.”+ 23 Wanhu no, efisɛ na ne nsa ho wɔ nwi te sɛ ne nua Esau. Enti ohyiraa no.+ 24 Ɛnna obisae sɛ: “Ampa ara sɛ wone me ba Esau?” Na obuae sɛ: “Yiw, mene no.” 25 Afei ɔkae sɛ: “Me ba, brɛ me wuram nam no bi nni, na minhyira wo.”* Enti ɔde brɛɛ no na odii, na ɔde nsã* brɛɛ no ma ɔnomee. 26 Ɛnna ne papa Isak ka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, mesrɛ wo, twiw bɛn me na befew m’ano.”+ 27 Enti otwiw bɛn no, na ofew n’ano, na ɔtee n’ataade mu hua.+ Ɛnna ohyiraa no sɛ: “Hwɛ, me ba ho hua te sɛ afuw a Yehowa ahyira so hua. 28 Nokware Nyankopɔn no mma wo ɔsoro bosu+ ne asaase pa+ ne hwiit* ne bobesa foforo+ bebree. 29 Ma aman nsom wo, na amanaman nkotow wo. Di wo nuanom so, na wo maame yam mma nkotow wo.+ Nnome nka obiara a ɔbɛdome wo, na nhyira nka obiara a obehyira wo.”+ 30 Bere a Isak hyiraa Yakob wiei a ofii ne papa Isak anim kɔe ara pɛ na ne nua Esau fi ahayɔ bae.+ 31 Ɔno nso yɛɛ akɔnnɔduan de brɛɛ ne papa, na ɔkae sɛ: “Papa, mesrɛ wo sɔre na di wo ba wuram nam no bi na hyira me.”* 32 Ɛnna ne papa Isak bisaa no sɛ: “Ɛyɛ wo hena?” Na obuae sɛ: “Ɛyɛ me, wo ba panyin Esau.”+ 33 Afei, na Isak ho rewosow biribiri, na ɔkae sɛ: “Ɛnde hena na okokum wuram nam brɛɛ me ma midii ansa na woreba yi? Mahyira no, na obenya nhyira nso!” 34 Bere a Esau tee ne papa asɛm no, ɔde awerɛhow sui denneennen, na ɔka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Papa, mesrɛ wo, hyira me, hyira me bi!”+ 35 Nanso ɔkae sɛ: “Wo nua no abɛdaadaa me agye wo nhyira.” 36 Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɛnyɛ ɛno nti na ne din de Yakob* no? Mprenu ni a watwitware m’ananmu.+ Wagye me panyin dedaw,+ na seesei nso wabegye me nhyira!”+ Ɔtoaa so sɛ: “Enti woannyaw nhyira biara amma me?” 37 Nanso Isak buaa Esau sɛ: “Hwɛ, mayi no sɛ onni wo so,+ mede ne nuanom nyinaa ama no sɛ nkoa, na mede hwiit* ne bobesa foforo nso ahyira no.+ Me ba, dɛn bio na metumi ayɛ ama wo?” 38 Afei Esau bisaa ne papa sɛ: “Papa, enti nhyira baako pɛ na wowɔ? Papa, hyira me, hyira me bi!” Ɛnna Esau tuee su mu.+ 39 Enti ne papa Isak buae sɛ: “Hwɛ, wo ne asaase pa ntam kwan bɛware, na wobɛtena baabi a ɔsoro bosu nni.+ 40 Wo sekan na wonam so bɛtena ase,+ na wobɛsom wo nua.+ Nanso sɛ wo ho fi ase yeraw wo a, wubebu ne kɔndua mu ayi afi wo kɔn mu.”+ 41 Esiane sɛ Esau papa hyiraa Yakob nti, Esau nyaa ne nua no ho tan,+ na ɔkae wɔ ne komam sɛ: “Ɛrenkyɛ na masie* me papa.+ Ɛno akyi no, mekum me nua Yakob.” 42 Bere a wɔbɛkaa asɛm a Rebeka ba panyin Esau aka no kyerɛɛ no no, ntɛm ara na Rebeka soma kɔfrɛɛ ne ba kumaa Yakob, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, wo nua Esau abɔ wo ato hɔ; onya wo a, obekum wo.* 43 Enti me ba, tie nea mereka akyerɛ wo yi. Sɔre guan kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran.+ 44 Tena ne nkyɛn kakra kosi sɛ wo nua no abufuw ano bedwo; 45 twɛn kosi sɛ wo nua no abufuw bɛbrɛ ase na ne werɛ befi nea wode ayɛ no no. Afei mɛsoma ma wɔabɛfa wo afi hɔ. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mehwere mo baanu nyinaa da koro?” 46 Akyiri yi, Rebeka ka kyerɛɛ Isak sɛ: “Het+ mma mmea nti m’anigye asa. Na sɛ Yakob nso kɔware Het mma mmea te sɛ eyinom wɔ asaase yi so a, ɛnde na mete ase reyɛ dɛn?”+
^ Anaa “me kra nhyira.”
^ Anaa “wo kra nhyira.”
^ Anaa “me kra nhyira wo.”
^ Anaa “wo kra nhyira me.”
^ Ɛkyerɛ, “Nea Okura Obi Nantin; Nea Osi Obi Ananmu.”
^ Anaa “magyam.”
^ Nt., “nea ɔde rekyekye ne ho werɛ ne sɛ onya wo a, obekum wo.”